warkii.com » Petr Cech Oo U Duulaya Jarmalka Si Uu Usoo Dhamaystiro Heshiiska Ay Chelsea Kula Wareegayso Kai Havertz
Shan su’aal oo jawaab u baahan kadib heshiiskii lagu gaaray Villa Somalia
Al-Shabaab ‘oo gacanta ku dhigay diyaarad ku dhacday’ duleedka Ballidogle + Sawiro
Yuusuf Garaad: Aniguba mar baan dhacay – Qormo ku socota ardayda ku dhacday imtixaanka
Petr Cech Oo U Duulaya Jarmalka Si Uu Usoo Dhamaystiro Heshiiska Ay Chelsea Kula Wareegayso Kai Havertz
Chelsea ayaa wada hadallo la bilowday kooxda reer Germany ee Bayer Leverkusen oo ay ka doonayso kubbad sameeyaha da’da yar ee Kai Havertz.
Sida uu ku warramay Sky Germnay, 21 jirkan ayaay Blues heshiiskiisa ku dhowdahay, waxaana Jarmalka u duulaya Petr Cech oo ah lataliyaha dhinaca Farasmada Chelsea si uu usoo dhamaystiro heshiiska uu laacibkani ku imanayo kooxda reer London.
Chelsea ayaa la rumaysan yahay in maalintii Axadda ay wada-hadallo fool ka fool ah yeesheen Leverkusen, iyadoo ay Leverkusen hoos u dhigtay qiimaha laacibkan oo ay gaadhsiisay £70 milyan oo Gini halkii ay markii hore ka taagnayd £90 milyan oo Gini.
Sababta ugu weyn ee Bayer Leverkusen ku riixday inay hoos u dhigto qiimaha Havertz ayaa la rumaysan yahay inay tahay heshiiskiisa oo laba sannadood ka hadhsan yihiin iyo laacibkan oo ay ka go’an tahay inuu ku biiro kooxaha waaweyn ee Yurub, isla markaana aanu cusboonaysiinin qandaraaskiisa hadda.
Warku wuxuu intaa ku daray in Frank Lampard uu ku qanciyey Havertz oo ay khadka telefoonka ku wada hadleen, inuu uga baahan yahay Stamford Bridge oo uu qayb muhiim ah ka noqon doono kooxdiisa xili ciyaareedka soo socda.
Chelsea waxay hore ula soo wareegtay weeraryahanka reer Germany ee Timo Werner iyo garabka kooxda Ajax ee Hakim Ziech oo haddaba ku sugan London, waxaana Lampard uu filayaa in Havertz uu noqon doono saxeexiisa saddexaad si uu horyaalka ugula tartamo Liverpool iyo Manchester City oo saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey koobka iska beddelay.
Real Madrid, Barcelona iyo Bayern Munich ayaa hore ugula tartamayay Chelsea saxeexa Kai Havertz, hase yeeshee Manchester United oo markii hore ku jirtay loollanka ayaa uga leexatay Jadon Sancho.
Qoyska boqortooyada dalka Sacuudiga oo laba u kala qeybsamay iyo sababtaSeptember 19, 2020
Yuusuf Garaad Cumar: “Aniguba mar baan dhacay”September 19, 2020
Ganacsiga Soomaalida oo ka xoroobaya dekedaha Imaaraadka kuna xirmay laba dal oo kaleSeptember 19, 2020